Kora Federaalizimii: ABO fi KFO'n kora Maqaleetti qophaa'erraa maaliif akka hafan himan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Kora federaalizimii Maqaleetti ta'ame irratti paartileefi namoonni waamicha taasifames irratti hirmaataniiru
Addi Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) kora federaalizimii irratti xiyyeeffate Maqaleetti qopheesserratti paartileen federaalistii ta'an hedduu irratti hirmaatanis ABO fi KFO'n garuu irraa hafaniiru.
Kora yeroo lammataaf qophaa'e kun mataduree 'Heera mootummaafi Sirna Federaalawaa Sab-daneessaa Baraaruu' kan jedhudha.
Kora federaaliizimii baraaruu 'TPLF' fi yaada hirmaattotaa
Haata'u malee, waggoota 27 darban hanga MM Abiy aangoo qabatanitti dhaabni ADWUI olaantummaan TPLF keessa ture sirna federaalizimii dimookiraatawaa hin taaneen bulchaa ture jedhamuun qeeqama.
Kanaaf, ar'a sirna federaalaatiif wabii ta'uuf yaaluun ykn birmachuu waamuun TPLF taajjabbii jalaa isa hin oolchine.
Dhaabbilee siyaasaa Oromoo jajjaboodha jedhamaniif sirna federaalaa bu'uura qabsoo isaanii godhachuun socho'an akka ABOfi KFOn maaliif akka kora kana irratti hin himaanne BBC Afaan Oromoo gaafateera.
Waamichi TPLF irraa taasifamus odeeffannoo ani qabuun namni dhaaba isaanii bakka bu'e kora Maqalee kanarratti hirmaataa jiru kan hin jirre dubbatan Obbo Addisuu Bullaallaa.
TPLF sirna federaalizimii seeraana hojiirra oolchaa hin turre, ittiin sabaafi sablammoota cunqursaa ture. Har'a sirna federaalizimiif nan quuqama jechun isaa waan itti abdatamu miti.
"Gaafa isatti hammaate sirna federaalaan hordofa jedhee, gaafa itti tole ammoo maqaa saniin saamaa ture waan ta'eef hamileen isaanii hagas mara nu hin ajaa'ibu.
'Sagantaan keenya wal fakkaachuu danda'a garuu seenaan keenya wal hin fakkaatu. Nuti harki keenya qulqulluudha. Isaan kaleessa nu saamaniiru, ammallee marsaa biraa of haaromsanii samuu barbaadu. Kanaaf jecha michoomina isaan waliin uumuu hin barbaadnu.
"Daboo fakkeefachuun humna godhachuuf waan godhamu jechuun sirna federaalizimiif quuqamanii waan godhan miti jechuun 'aangoorraa waan bu'aniifi," jechuun qeeqan.
Addi Bilisummaa Oromoollee sirni federaalaa dimookiraatawaa ta'e akka itti fufu kan barbaadu yoo ta'u, kora federaalistootaati jedhameefi Maqaleetti ta'amaa jiru irratti hirmaataa akka hin jrre beeksiseera.
Dubbii Himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa waamichi dhaaba isaaniifis ergamuullee 'kan iratti hin hirmaanne ta'uu hubachifneerra,' jedhan.
"Dhimma federaalizimii osoo hin taane nuti humna achitti walgahii kana waame waliin walgahii akkasii waliin gaggeessuu dura waan fixachuu qabnu waan jiruuf irraa hafne," jedhan.
'Sirni Federaalizimii maqaadhaaf malee qawween ummata bulchaa jira'
Kanas yoo ibsan, "humni achi jiru waggoota dheeraaf miidhaa olaanaa ummata Oromoorraan kan geessisaa ture, miseensota ABO kan dhabamsiiseefi dhaaba irrattis miidhaa olaanaa dhaqqabsiisesera," dubbatu.
Kanaan alatti akka addatti haasaan dhaaba naannoo Tigraay bulchu, TPLF, waliin eegalan yoo jiraateef kan gaafanne Obbo Toleeraan ''Haasaa akkasii waliinuu hin qabnu. Hariiroo homaatuu dhaaba TPLF waliin hin qabnu," jedhan.
Ofiifuu komii irraa qabna, gaaffii irraa qabna isa gaafa xumuranne gara kaanitti ce'uu kan dandeenyu jechuun ibsan.
Isa xumuranna jedhan akkamin raawwachuuf akka yaadan kan gaafanne Obbo Toleeraan 'nuti rakkoo keenya ibsanneerra. Deebii achirraa dhufutu murteessa, jechuun ibsan.